i-bose iqala ukuthengisa ngolwesiHlanu kwivenkile yayo ekwi-Intanethi kunye ne-amazon
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo UBose uqala ngentengiso yangoLwesihlanu oMnyama kwivenkile ekwi-Intanethi nakwiAmazon
Ukuba uphendla isibini esinexabiso eliphantsi kweli lelona xesha lilungileyo lonyaka lokufumana. Iinkampani ezininzi ziqhuba izivumelwano zentengiso ngeLwesihlanu omnyama, kodwa ezinye ziqala ukuthengisa kwiveki ephelileyo.
UBose ngoku uqhuba intengiso yangoLwesihlanu oMnyama kwezinye zazo ii-headphone ezithandwayo , egubungela uninzi lwamaxabiso. Iimveliso zeBose & apos zithengiswa kwivenkile ekwi-Intanethi nakwiAmazon, kwaye kwinto esinokuyixela ukuba akukho mahluko wexabiso.
I-QuietComfort 35 ii-headphone ezingenazingcingo- $ 329.95 (yayiyi- $ 349.95);
Iifowuni ezingenazingcingo zeSoundSport- $ 129.95 (yayiyi- $ 149.95);
I-SoundSport Pulse i-headphone ezingenazingcingo- $ 179.95 (yayiyi- $ 199.95);
I-SoundLink ejikeleze-indlebe ii-headphone ezingenazingcingo II- $ 229.95 (yayiyi- $ 279.95);
I-SoundSport in-ear headphones (izixhobo ze-Apple )- $ 49.95 (yayingu- $ 99.95);
I-QC25 ingxolo yokucima ii-headphone (izixhobo ze-Apple )- $ 179.95 (yayiyi- $ 299.95);
I-SoundTrue Ultra kwi-earphone ye-earphone (izixhobo ze-Apple) - $ 79.95 (yayiyi-129.95);
I-QC25 ingxolo yokucima ii-headphone (izixhobo ze-Samsung / ze-Android )- $ 179.95 (yayiyi- $ 299.95);
I-SoundTrue Ultra kwi-earphones ze-ear-ear (i-Samsung / i-Android izixhobo) - $ 79.95 (eyi-129.95 yeedola).
Ezinye zezi zinto ziphawulwe njenge & ldquo, iSpecial, & rdquo; ke banokuphakanyiselwa kuphela umda, kodwa izivumelwano zoLwesihlanu oMnyama kufuneka zibekhona kude kube sekupheleni kwiveki ezayo ubuncinci.
umthombo: UBose , IAmazon
incwadi yemifanekiso kwifowuni
Iingcebiso kunye namaqhinga e-s21
Phantse iminyaka emihlanu ubudala i-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge bafumana uhlaziyo lwesoftware entsha
Eyona misebenzi iphambili ye-iPhone SE ngoku
Uvavanyo lweSamsung yeGear Fit 2 Pro
Ufikelela njani kwizicelo zeSIM khadi kunye neenkonzo kwi-iPhone
Intsingiselo efihliweyo ngasemva kwamagama ezigebenga zobugcisa: Ithetha ukuthini i-Samsung?
I-Apple: Ingxaki yebhetri ye-iPhone 6 ivela kumoya omninzi kwinkqubo yokuvelisa
Ityala elityholwayo lePixel XL 2 xa kuthelekiswa nePixel yentsusa kunye neGPS S8- ewe, inkulu